﻿Download Iphekhi Yokusebenzisana Kolimi i-Windows 7 from Official Microsoft Download CenterWarning: This site requires the use of scripts, which your browser does not currently allow.See how to enable scriptsDownload CenterMenuSearchSearch Download Center
LIP_zu-ZA-32bit.mlc2.6 MB2.6 MB
LIP_zu-ZA-64bit.mlc4.1 MB4.1 MB
Uhlelo:1.0Igama Lefayela: LIP_zu-ZA-32bit.mlcLIP_zu-ZA-64bit.mlcUsuku Ekhishwe Ngalo:09-11-2010Usayizi Wefayela: 2.6 MB4.1 MB
• I-Microsoft Windows 7 • Nokufakwa kolimi lwesisekelo oludingekile le-Windows 7: Isingisi • Isikhala esikhululekile sokulanda i-4.63 Mb • Isikhala esikhululekile sokumisa i-15Mb Imiyalelo
ISEXWAYISO: Uma unombhalo wemfihlo we-BitLocker ovuliwe, sicela uwukhiphe ngaphambi kokufaka i-LIP. Vula i-Control Panel, khetha i-System and Security, bese i-BitLocker Drive Encryption. Qhafaza okuthi i-Suspend Protection. Ngoba zingukulanda okwehlukile zenguqulo ye-Windows 7 LIP ye-32-bit ne-64-bit, ngaphambi kokuba uqale, kumelwe uthole ukuthi yiziphi izinguqulo ze-Windows 7 ozifakile. Nansi indlela yokuthola ukuthi iyiphi inguqulo ye-Windows 7 oyifakile: Qhafaza inkinobho i-Start bese uqhafaza ngokwesokudla Kukhompyutha bese ukhetha i-Properties. Lokhu kuzoletha ukwaziswa okuyisisekelo ngekhompyutha yakho. Bheka kungxenye Yesistimu ukubona uhlobo Lwesistimu. Lokhu kuzobonisa uma i-Windows 7 Isistimu Esebenzayo Yisistimu Esebenzayo ye-32-bit noma Isistimu Esebenzayo ye-64-bit. Ukuze ufake inguqulo ye-32-bit, yenza lokhu:
Qhafaza inkinobho yeLanda, bese uqhafaza Open ukufaka LIP noma
Qhafaza inkinobho yeLanda Qhafaza ku Save ukukopisha ifayela kwikhompyutha yakho, Zulazulela kufayela elandiwe bese uqhafaza kabili kuyo ukufaka LIP